Gtalk Off Line Login - နည်ပညာနှင့်ဆောဖ်ဝဲများ
Gtalk Off Line Login
ကိုကျော်သူလင်းကလဲရှာဖွေတင်ပြပါတယ် အများကြီးပဲ .... ကျွန်တော့်ဟော်တယ် က ချက်ပုန်း လေးတွေ အတွက် တော့ special ပေါ့ ... ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော် ကူး ပြချင်တဲ့ အကြောင်းလေးကတော့ Gtalk က ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း တွေကို ကိုယ်ကတော့ မြင်ရမယ် သူတို့ ။ offline ဖြစ်နေမယ်… အဲဒါကို တစ်ချို့ကတော့ Mail ထဲကနေ invisible လုပ်ထားကြတယ်။ အခု ကျွန်တော် ဖော်ပြချင် တာကတော့ Mail ထဲကမဟူတ်ဘူး။ Gtalk Gadget လို့ ခေါ်တယ်… ဒီနေရာလေးကိုသွားလိုက်ပါ။
အဲဒီမှာ အရင်ဆုံး Signin ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်း Gtalk က Username နဲ့ Password ကိုရိုက်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် စလို့ ရပါပြီ… သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို Gtalk မှာလိုပဲ တွေ့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် Gtalk နဲ့ တော့ အကုန်မတူဘူးနော်။ သူက တစ်မျိုးလေး… အဲဒီအထဲကို ရောက်ရောက် ချင်း Gtalk အတိုင်းပဲ Online မှာရှိနေတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကို အပေါ်ဆုံးမှာ တွေ့ရမယ်။ အခု အတိုင်း ဆို သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို Gtalk မှာ Online အနေနဲ့ ပုံမှန်အတိုင်း မြင်ရမယ်…. ပြောချင်တဲ့ သူကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ပြောကြည့်ပါ။ပုံမှန် Gtalk အတိုင်းပဲ…. သူကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို စကားပြောဖို့ ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင်
ပုံမှန် Gtalk ကလို Window တစ်ခု အနေနဲ့တော့ ထွက်မလာဘူး။ Tab တစ်ခုအနေနဲ့ Contacts ရဲ့ဘေးမှာ ကိုယ်ပြောမယ့် သူငယ်ချင်းရဲ့ နာမည်နဲ့ ထွက်လာမယ်…ကဲ အခုစပြောတော့မှာက သူငယ် ချင်း တို့ သိချင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို သူများမမြင်အောင်
ခိုးကြောင်ခိုး ၀ှက် ချက်ရဘူးနော်...
လောက ရဲ့ အလင်းရောင်
အဓမ္မရဲ့  ဖုန်းကွယ်မူအောက်မှာ...
ဘ၀ရဲ့  အလင်းရောင်လားလို့
သိလိုက်ရတော့ ဓမ္မ ဆိုတာက
နည်းပညာ ဒါနပြုသော Blog များ
Blog တစ်ခုရေးတော့မယ် ဆိုရင်..
Administrator password မေ့သွားခဲ့ရင်...
Ram ထပ်မစိုက်ပဲ memory တိုးချင်ရင်
Run box comman shotcat လေးတွေပါ
Windows XP Commands Language (2)
Task bar ကိုမြန်မာဖောင့်ပေါ်အောင်
WINDOWS XP ကို လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် လမ်းညွှန်
Windows အတွက် Geniun Key တောင်းနေတဲ့အခါ...
shutdown, restart စသည်များကို shortcut လုပ်ထားမယ်
Clear Recent Command From The Run Box
Registry ဆိုတာ ...ဒီလို့တဲ့
မြန်မာGoogle user များသိသင့်တဲ့ Google ရဲ့ Story
group policy မှ drives: များကို ပိတ်ခြင်း၊ ဖျောက်ခြင်း
(printer)spoolsv.exe using 99% of cpu
Application of Windows XP command
Windows XP မှ sound problem များဖြေရှင်းရန်
MAC address ပြောင်းနည်း
Windows ကို ကလိနည်း...
Windows XP Super မြန်မြန်သုံးနည်း (၂)
Windows Vista Super မြန်မြန်သုံးနည်း...
Crack နှင့် Key များရှာဖွေခြင်း...
.beta file ရေးပြီး Auto Delete Temp File သုံးနည်း